Steam Deck: Valve Inozivisa Inotakurika PC Yemitambo Console | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | chiutsi
Ini handisi mukuru fan yemavhidhiyo mitambo. Izvozvi ini ndinoshandisa yangu yekuzorora nePPSSPP, inova emulator yePSP yakamiswa ikozvino, asi vatambi chaivo senge nyowani nyaradzo kana maPC ane simba. Pakati pemhando mbiri idzi dzevatambi, Ndinofunga avo vazhinji vanosarudza komputa, ndosaka ndakashamisika kuverenga iyo Valve Yakazivisa Steam dhizaini.
Sezvo isu tichigona kufungidzira kubva kuzita rayo uye iyo yemusoro musoro, Steam Deck ichave iri koni ichave isingaite chete inoenderana neSteam, asi ndiyo ichave nzvimbo kubva ichawanikwa mitambo. Pane iyo yepamutemo webhusaiti ivo vanoisimudzira seconsole iyo inotendeuka, inoisa muzita rekushandisa uye password uye wotanga kutamba yedu Steam library.
Steam Deck Rondedzero
Zen 2 + RDNA 2 processor inopa zvinopfuura zvakakwana kuita kumhanya yazvino mitambo yeAAA musimba rakakomberedza rakakomberedza.
Crosshead kuruboshwe uye 4 mabhatani kurudyi.
Analog matanda, mana anokonzeresa uye mana mabhatani pane iyo kubata.
7 padiki kubatwa chidzitiro.
Kuvimbika kwepamusoro kurira.
Maawa manomwe kana masere ekuzvimirira.
Kadhi re SD.
Mikana yekuibatanidza kune yekunze yekutarisa, mbeva uye keyboard.
64GB, 256GB uye 512GB kuchengetedza.
Inofambiswa neshanduro nyowani yeSteamOS yakavakirwa paArch Linux uye KDE desktop.
Rondedzero yakadzama mu Iyi link.
Iyo Steam Deck ikozvino inogona kuchengetwa € 419 yeiyo 64GB vhezheni, € 549 ye256G kana € 679 ye512GB. Ivo vese vanosanganisira kesi, asi iyo inodhura kwazvo inoshandisa nekukurumidza memory memory uye iyo yepamusoro-ye-iyo-line zvakare ine anti-inoratidza chiratidzo skrini. Ivo avo vanosarudza kuichengetera ivo vanozoiwana muna Zvita, saka inogona kuve yakanaka Kisimusi chipo kune vatambi.
Mubvunzo unosara ndewekuti mutengo wakanaka here kana kuti kwete. Tiri kutaura nezve a inotakurika koni inokwanisa kufambisa PC mitambo, iyo ingatsanangure kuti ine mutengo wakafanana neiyo yezvinyaradzo senge PlayStation uye Xbox. Chandinongoziva ndechekuti haina kugadzirirwa ini, mumwe munhu anofara kupedzisa mitambo seDungeon Kutyisidzirwa: Chigaro cheChigaro cheAgony mu PPSSPP.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Deck: Valve Inosheedzera Handheld PC Gaming Console ye € 419
PineTime, yakavhurwa sosi smartwatch, ikozvino inowanika chete $ 27